Gonesa kukwirisa chikamu muUbuntu 19.04 | Linux Vakapindwa muropa
Gonesa kukwirisa chikamu muUbuntu 19.04
Paunenge uchiisa Ubuntu paPC kana palaptop ine yakanaka yekutarisa, tinogona kumhanya muchinetso, kuyera kwacho kazhinji kungave kukuru kwazvo kana kudiki kwazvo.
Izvi zvinoitika nekuti, nekutadza, Ubuntu inongova nemaviri ekuyera kukosha anowanikwa; 100% uye 200% uye zvichazoonekwa zvidiki kwazvo pane iyo monitonisi pa100% zvakajairwa kuyera uye yakakura kwazvo pa200%.
Pane mhinduro here? Ehezve, kubvira Kubuntu 19.04 pane iko kutove kukwirisa kuyera, chinhu chinokutendera iwe chiyero chemufananidzo wechikwiriso kune mamwe makodhi asi zana, nekudaro uchichinjisa kune zvaunofarira chaizvo.
1 Maitiro ekugonesa fractional kuyera mu Ubuntu 19.04
2 Dzima chidimbu chinokwana muUbuntu 19.04
Maitiro ekugonesa fractional kuyera mu Ubuntu 19.04
Usati watevera maitiro ku inogonesa kuyera zvishoma Ramba uchifunga kuti yakavanzwa nekuda kwechikonzero, ichiri muchikamu chekuyedza, izvi zvinoreva kuti zvimwe zvikanganiso zvinogona kuitika, kunyange hazvo pasina chinotangwazve nekutangazve.
Nekushandisa kuyera chikamu iwe unogona kusarudza pakati pechishanu kuyera tsika, 100%, 125%, 150%, 175% uye 200%, nenzira iyi unogona kusiya chinongedzo kuchido chako.
Kuti uite chikamu chidiki iwe unofanirwa kumhanyisa inotevera mirairo mune chinouraya:
Ukangozviita uye kutangazve unogona kuenda kune Zvirongwa> Zvishandiso> Ratidza uye ona hutsva hutsva.
Dzima chidimbu chinokwana muUbuntu 19.04
Kana chikamu chidiki chiri kukupa iwe yakawanda yekukanganisa kana zvisiri izvo iwe zvawaitarisira uye iwe uchida kuzvidzima, iwe unongofanirwa kumhanyisa unotevera kuraira mune terminal.
gsettings reset org.gnome.mutter yekuyedza-maficha
Mushure mekuita kudaro, tangazve uye voila, iwe zvakare uchave nezviyero zviviri zvekusarudza kubva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Gonesa kukwirisa chikamu muUbuntu 19.04
Fernando Gonzales nzvimbo yekuchengetedza mufananidzo akadaro
Ndine resolution diki (1366 × 768) zvese zvinotaridzika kunge zvakakura; pachave nemhinduro yekunatsiridza sezvakaita muUbuntu 16.04 (Kuyera kwemamenyu uye mabara ezita) yakabvumira 0.875… zvichidzika.
Pindura Fernando Gonzales
Kugadzira mafomu neLibreOffice Base varoyi
Docker ye Windows 10 inosarudza WSL2 uye ichachinjira kwairi munguva pfupi